Madaxweyne, Hargeysi in maanta la sii kala qaybiyo uma baahna! – somalilandtoday.com
Madaxweyne, Hargeysi in maanta la sii kala qaybiyo uma baahna!
Madaxweyne, Hargeysi maanta horumar iyo cadaalad ka weyn in xafiisyo dawladeed la qaybsado ayey kaaga fadhidaa, macno weyn oo ay u samaynaysaa ma jirto deegaankaasow xarunta Guurtida qaado, kaas kalowna xafiiska Wakiilada qaado, kaas kalowna xarunta madaxtooyada qaado!.
Madaxweyne,Caqliga maanta ku taliyay xarumaha waaweyn ee dawladda ha la qaybsado waa mid aan habeen jirin, haddii laga fursan waayose in la raro xafiisyada waaweyn ee dawladda waa in isku meel loo raraa meeshay doontaba meeshaasi ha noqotee, sidaasba amniga xafiisyada iyo ka madaxda iyo ka waddankuba ku jiraaye.
Madaxweyne arinkaas aad maayorka Hargeysa soo fartay ee uu maanta golaha Guurtida ka hor sheegay, waa mid horseed ka noqon doona kala qaybsanaantii markii horeba caasimada Hargeysa ka jirtay inay sii fido oo beeluhu isku qabsadaan dhismayaasha xafiisyada waaweyn ee dawladda.
Markaa madaxweyne balaayo gafuur la qabtay leedahaye dabo la qabto ma lehe, arinkaas dib uga fakar oo si fudud oo aadan dhaadayn Hargeysa iyo ummadaba ha u sii kala qaybin!